मिर्गौलामा पत्थरी हुँदाका लक्षण र यसको उपचार - NepalKhoj
मिर्गौलामा पत्थरी हुँदाका लक्षण र यसको उपचार
नेपालखोज २०७६ पुष ८ गते ६:५९
हामीले पिउने कफी, चिसो या चियाजस्ता पेय पदार्थ पिउनाले पिसाबमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्न गई मिर्गौलामा पत्थरी हुने गर्दछ । मिर्गौलाको जोडी पिठ्युँको मध्यभागमा करङको ठीक मुनि रहेको हुन्छ । मूत्राशयको पत्थरी मूत्राशयमा मिनरल्स फिल्टलीकरण हुने कारणले हुन्छ । साथै, पिसाबमा पानीको मात्रा कम हुँदा पनि पत्थरीको समस्या देखिन्छ । मिर्गौलामा क्याल्सियम, फोसफेट अक्जालेट र युरिक एसिड गरी चार पत्थरीहरू हुने गर्दछन् । हाम्रा केही गल्ती र लापरबाहीका कारण मिर्गौलामा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
१. पेट दुख्नु
२. पटकपटक ट्वाइलेट जानु
३. पिसाब गर्ने बेलामा पिसाब पोल्नु
४. पिसाबबाट रगत आउनु
५. छटपटी हुनु
६. भोक नलाग्नु
७. ज्वरो आउनु
यी माथिका लक्षणहरू देखा पर्ने्बित्तिकै तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ । डाक्टरको सल्लाहअनुसार पत्थरीको संख्या, प्रकृति हेरी उपचार विधि अपनाउने गर्नुपर्छ । उपचारमा शल्यक्रिया नै चाहिन्छ भन्ने छैन, तर पत्थरी ठूलो रहेछ भने शल्यक्रिया गर्नुपर्दछ ।